Indima yekhemesti kwiNyanga yoKwazisa ngeSwekile - Imfundo Yezempilo | Eyenkanga 2021
Uluntu, Inkampani Inkampani, Imfundo Yezempilo Inkampani, Ukuphuma Imfundo Yezempilo, Iindaba Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Imfundo Yezempilo, Impilo Inkampani Iindaba Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Ulwazi Lweziyobisi Inkampani, Iindaba Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Imidlalo
Eyona >> Imfundo Yezempilo >> Funda ngendlela usokhemesti wakho anokukunceda ngayo kwimfundo yeswekile ngexesha leNyanga yeSwekile yeSizwe
Funda ngendlela usokhemesti wakho anokukunceda ngayo kwimfundo yeswekile ngexesha leNyanga yeSwekile yeSizwe
Imfundo yezeMpilo Usokhemesti wazi kakuhle
U-Novemba uqalisa iNyanga yeSwekile yeSizwe, ixesha elinikezelwe ekusasazeni ulwazi malunga nefuthe lesifo seswekile kwilizwe liphela kunye nento esinokuyenza ukuxhasa abo banesifo seswekile. Usuku lukaZwelonke lweSwekile, ekwabizwa ngokuba lusuku lweSwekile kwiHlabathi liphela, nge-14 kaNovemba.
Isifo seswekile yenye yezona meko zixhaphakileyo zempilo e-United States-siyasichaphazela ngaphezulu Izigidi ezingama-30 zaseMelika , ngokweZiko laseMelika lokuLawula nokuThintela izifo (CDC). Uninzi ngakumbi lusengozini eyandayo yesifo seswekile, ngakumbi ukuba bafumanekile benayo kwisifo seswekile .
Ngethamsanqa, oosokhemesti bakwimeko entle yokusasaza ulwazi ngesifo seswekile kwizibhedlele nakwezoluntu. Banokusebenza njengabahlohli beswekile kwizigulana zabo kunye nabo banokuba semngciphekweni wokuhlaselwa sisifo.
Kutheni imiba yokwazisa ngesifo seswekile
Abo banesifo seswekile bachatshazelwa luhlobo 1 okanye uhlobo 2 lweswekile. Ngaphandle kohlobo 1 kunye nohlobo 2 lweswekile, i-prediabetes kunye neswekile yokukhulelwa (isifo seswekile ngexesha lokukhulelwa) akuqhelekanga nokuba kunjalo. Okwangoku, abantu abaninzi abayazi ingozi kunye neengxaki zempilo ezinxulumene nesifo seswekile. Emva kwayo yonke loo nto, kunye igazi elonyukayo , ngamanye amaxesha kuthathwa njengombulali othuleyo.
Ukuchazwa ngamanqanaba aphezulu eswekile egazini, isifo seswekile ngamanye amaxesha sinokungaqapheli ixesha elide de kube sele kwenziwe umonakalo. Akukho ndlela yokwenyani yokuba abaguli abangafumaniswanga bazive ukuba banamazinga aphezulu eswekile. Ukunikwa ithuba lokuqhubela phambili kungaqapheleki, isifo seswekile singakhokelela kwiingxaki ezinzima ezinjengesifo sentliziyo, isifo sezintso, kunye nokonzakala kwemithambo-luvo, phakathi kwabanye.
Ngenxa yezi ngxaki, kubalulekile ukuqhubeka nokuhlolwa rhoqo ngonyaka nogqirha wakho. Baya kujonga uxinzelelo lwegazi, amanqanaba eglucose egazini lakho, kunye ezinye izinto ezinobungozi ukumisela ukuba ingaba usemngciphekweni na. Ewe imbali yakho yosapho kunye nezinye iimeko zempilo ziya kuthathelwa ingqalelo xa kuvavanywa umngcipheko wesifo seswekile.
Indlela oosokhemesti abanokukunceda ngayo ukusasaza ulwazi ngesifo seswekile
Ukuba wena okanye obathandayo bajongene nobunzima nge-inshurensi okanye ukufumana ukhathalelo olufanelekileyo lwesifo seswekile, kuya kufuneka uzive ukhululekile ukutyelela ikhemesti ekufutshane nawe ukuze ubakhokele.
Uvavanyo kunye nemfundo
Iikhemesti zihlala zibamba ukuhlolwa kwezempilo kugxilwe kwimfundo yeswekile. Olu hlolo luhlala luvulelekile eluntwini, abaguli basokhemesti, kunye nabathandekayo babo. Kolu hlolo, abasebenzi basekhemesti, abafundi basekhemesti, okanye amavolontiya onyango ayafumaneka ukwenza uvavanyo lokujonga iswekile. Abo banesifo seswekile okanye ii-prediabetes nabo baya kuba nethuba lokuxoxa ngeenjongo zabo zonyango kwaye bafundiswe nangazo naziphi na izinto abanokukhathazeka ngazo.
Oosokhemesti banokucebisa ngokutya kunye notshintsho kwindlela yokuphila ukunceda ukunciphisa umngcipheko weengxaki. Ezi ngcebiso zinokusekelwa kwizikhokelo zeAmerican Diabetes Association (ADA) ukutya okune-carbohydrate encinci iipateni.
Uninzi lwabantu abanesifo seswekile bahlala beya kwikhemesti ukuze bangafumani amayeza abo kuphela kodwa bafumane nezinye iimveliso ezinje ngeglucose monitors okanye istock compression. Oosokhemesti banokunceda ukufundisa abaguli ukuba basebenzise izixhobo ezithile abanokucebisa oogqirha babo. Kwaye kunye nosokhemesti unokunceda ekufundiseni indlela yokonga kwizixhobo kunye namayeza.
Amayeza ngundoqo ekunyangeni abo banesifo seswekile. Uphando lwesifo seswekile lufumanisile ukuba ukungathathi iyeza elifanelekileyo leswekile rhoqo inokuba neziphumo ezibi zempilo.
Kuba abaguli befumana amayeza abo kwindawo enye, usokhemesti angasebenza njengesilumkiso sesaziso ukuba babona nantoni na engaqhelekanga kwimpilo yesigulana kunye nembali yamayeza. Umzekelo, yithi uMariya uza ekhemesti kwaye usokhemesti uyaqonda ukuba uselibele ukulanda i-metformin yakhe. Eli lithuba elifanelekileyo lokuba usokhemesti ambuze ukuba usilawula njani isifo seswekile. Usokhemesti unokusebenzisa izakhono zokumamela esebenzayo ukumisela ukuba uMariya ukhathazekile iziphumo ebezingalindelekanga ze-metformin okanye ukulibala ukuyithatha ngokupheleleyo. Usokhemesti unokucebisa ukuba athethe nogqirha wakhe malunga notshintsho olunokwenzeka kunyango okanye kwidosi, kuxhomekeke kwingxaki.
Ngamanye amaxesha, isigulana sinokucwangcisa ulawulo lonyango lonyango (MTM) ukuze siye kunyango lwabo. Kolu hlaziyo, usokhemesti angachitha ixesha elininzi nesigulana ukuze axoxe ngendlela efanelekileyo yokuthatha amayeza athile, iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho, ukuhlangana kweziyobisi, kunye nezinye izinto ezibalulekileyo ekufuneka uzazi malunga nonyango. Usokhemesti unokufundisa ngendlela amayeza asebenza ngayo kunye nendlela eya kuthi incede ngayo ukuthintela iingxaki, njengokungasebenzi kwezintso, ukonakala kwentliziyo, kunye nesifo sentliziyo, ekuhambeni kwexesha.
Ukonga amayeza eswekile
Ukuba uthatha elinye lala mayeza athandwayo eswekile, ikhemesti yakho inokukunceda ugcine. Ukuba awukwazi ukuhlawula amayeza ayimfuneko, oosokhemesti banokukunceda ukuba usebenze nomboneleli wakho wezempilo ukuba utshintshele kumayeza angabizi mali-okanye akuncede usebenzise ikhadi lokugcina amayeza elifana ne-SingleCare ukunciphisa ixabiso.
Igama Ukwahlulahlula Ifomu yesisindo Umyinge oqhelekileyo Ixabiso elilodwa Ugcino olulodwa
IRiomet (metformin) IBiguanide Ithebhulethi yomlomo 500 mg kabini yonke imihla $ 4.00 Fumana isigqebhezana
Glynase (glyburide) Isulfonylurea Ithebhulethi yomlomo I-2.5 ukuya kwi-5 mg kanye yonke imihla ngesidlo sokuqala sosuku $ 11.66 Fumana isigqebhezana
IPrandin (repaglinide) Meglitinide Ithebhulethi yomlomo Xa iHbA1c iyi<8%, 0.5 mg with each meal.
Xa i-HbA1c iyi-% 8%, 1 okanye 2 mg ngesidlo ngasinye $ 56.49 Fumana isigqebhezana
Januwari (sitagliptin) I-DPP-4 inhibitor Ithebhulethi yomlomo 100 mg kanye yonke imihla kunye okanye ngaphandle kokutya $ 392.75 Fumana isigqebhezana
UVictoza (iliraglutide) I-GLP-1 receptor agonist Inaliti engaphantsi I-0.6 mg kanye yonke imihla kwiveki yokuqala, emva koko i-1.2 mg kanye yonke imihla $ 876.93 Fumana isigqebhezana
I-Jardiance (empagliflozin) Isithinteli se-SGLT2 Ithebhulethi yomlomo 10 mg kanye yonke imihla kusasa $ 432.94 Fumana isigqebhezana
ILantus (insulin glargine) I-insulin Inaliti engaphantsi Ekuqaleni, ukuya kwiiyunithi ezili-10 ngosuku. Idosi ehlengahlengisiweyo ngokusekwe kumanqanaba eswekile kunye neenjongo zonyango $ 70.20 Fumana isigqebhezana
Yintoni onokuyenza ukuthintela isifo seswekile?
Isifo seswekile yimeko emandundu, kodwa kwezinye iimeko siyathinteleka. Okona kuncinci, unokunceda abantu obathandayo baphephe iingxaki zokungafumaneki ngala manyathelo.
Ishedyuli yokuhlolwa rhoqo
Qiniseka ukuba ucwangcisa utyelelo lonyaka lonyango. Khuthaza usapho kunye nabahlobo bakho ukuba benze njalo, ngakumbi abo banesifo seswekile. Ungathetha nabantu obathandayo malunga noxinzelelo lwegazi kunye namanqanaba e-cholesterol, ezinokudlala indima kumngcipheko wesifo seswekile .
Yenza ukhetho ngendlela esempilweni
Unokuzama kwaye ukhuthaze ukutya okusempilweni kunye notshintsho kwindlela yokuphila phakathi kosapho kunye nabahlobo bakho. Zama ukuzibandakanya kwimisebenzi yomzimba xa uchitha ixesha kunye nabantu obathandayo, nokuba incinci njengokuhambahamba epakini. Thetha nabo malunga notshintsho kwindlela yokutya enokunceda ukuphucula isifo seswekile kunye nokukhuthaza imikhwa esempilweni.
Nxiba oluhlaza okwesibhakabhaka kwinyanga yesizwe yesifo seswekile
Abantu kwihlabathi liphela banokuchonga isangqa esiluhlaza njengophawu lweswekile kwindalo iphela. Yaziswa yi Umbutho wamazwe ngamazwe weSwekile (IDF) , isangqa esiluhlaza simele ubunye kuluntu lweswekile jikelele. Ungayibonisa inkxaso yakho kwinyanga yesizwe yesifo seswekile ngokunxiba oluhlaza okwesibhakabhaka okanye ilogo esemthethweni yesangqa esiluhlaza. Oku kunokunceda ukuqala incoko nomntu ongaziyo ukuba imele ntoni.
Ungawufunda umngcipheko ngokuya kuhluzwa kwaye uze nomhlobo okanye ilungu losapho kunye nawe. Ukuba ikhemesti yakho ayenzi njalo, ungakhuthaza usokhemesti wakho ukuba abambe iintsuku zokuvavanywa kwempilo yeswekile. Ukuba yinxalenye esebenzayo yoluntu kunokunceda ekunyuseni ulwazi ngesifo seswekile.
Hlala usesikhathini nemibutho
Mininzi imibutho kunye nezixhobo ezinceda ukuxhasa abantu abanesifo seswekile. Unokunikela kwimibutho enje nge-JDRF, umbutho ongenzi nzuzo okhokelela kwi Uhlobo lwehlabathi lwe-1 yophando lweswekile ukunceda ukufumana unyango olutsha. Eminye imibutho ibandakanya iDigital Diabetes Advocacy Alliance, iNational Kidney Foundation, kunye neZiko leSizwe leSwekile kunye neDigestive kunye neZifo zeZintso. Ezinye izixhobo eziluncedo zingafunyanwa kwisifo seswekile.org, indawo ye-American Diabetes Association (ADA).
Oosokhemesti kunye nezigulana ngokufanayo banokunceda ukukhuthaza iNyanga yeSizwe yeSwekile ngeendlela ezininzi. Ngokusasaza ulwazi malunga nobungozi kunye neengxaki ezinxulumene nesifo seswekile, sinokunceda abo bachaphazelekayo ukuba bafumane unyango abaludingayo ukuze baphucule umgangatho wabo wobomi. Ngale ndlela, abantu abaninzi banokuphila ubomi obude, obunempilo.
IMarfan Syndrome: Iinyani ezi-5 eziKhawulezayo ekufuneka uyazi
walmart $ 4 uluhlu lweziyobisi pdf
liphi igama eliqhelekileyo le-mobic
Unyango lwe-perioral dermatitis ekhawuntarini
Ingakanani inyumoniya eyosulela abantu abadala
indlela yokwenza usulelo lwegwele luhambe ngokukhawuleza